फेसबुकमा कोमल वली - सोसल ट्रेन्ड - साप्ताहिक
फेसबुकमा कोमल वली
पार्टी प्रवेश गर्दाचाहिँ ‘दीपावली’ ? टिकट पाउँदाचाहिं ‘कोमल वली’ ? मैले २०४४ मा राजाको पूर्वाञ्चल भ्रमणदेखि देखेको कोमल वली यत्तिकै चर्चित छिन् । राजनीतिमा उनलाई ल्याउँदा फाइदा देख्नेले राजनीतिमा ल्याए, उम्मेदवार बनाउँदा इज्जत देख्नेले उम्मेदवार बनाए । राजनीतिमा कोही जोगी हुन लाग्ने होइनन् हाम्रो जस्तो देशमा ।
अब यसरी बोल्नेछिन् कोमल वली, अहिले बेलुकाको नौ बजेको छ । म कोमल वली । अब राष्ट्रिय सभाबाट समाचार सुन्नुहोस्......
कहिले चरी डन, चमेरो डन, मनाङ्गे डन त, कहिले खुस्बु वली, कोमल वली । केपीको यो ‘डन’ तथा ‘वली’ हरूप्रतिको प्रेम अझ झांगिँदै जाओस् । कोमल वली फेरि अन्यत्र ‘पोइला’ हिंडेको सुन्नु नपरोस् ।
कोमल वली दिदीमा सांगीतिक कुशलता छ, राजनीतिक नेतृत्वको होइन । कुशल राजनीतिज्ञमा संगठनात्मक एवं वैचारिक क्षमता हुन्छ । पद प्राप्त गर्न मौसम फेरिएझैं वर्षमा तीन–चारवटा पार्टी परिवर्तन गर्नेहरू अवसरवादी हुन्छन् । आफू बन्नका लागि राजनीतिमा आउने र देश र पार्टी बनाउन जीवनभर बलिदान दिने मानिसहरूबीचको फरक छुट्टयाउन नसक्दा ठाकुर गैरेजस्ता मैनबत्तीहरू सधैँ अरूलाई उज्यालो दिँदादिँदै बलेर सकिन्छन् । पार्टीका लागि यो ठूलो दुर्भाग्य हो— चेतना होस् ।
वर्षौं झोला र झन्डा बोक्ने पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा कोमल वली कैयौं गुणा सक्षम नारी हुन् । कोमल पार्टीको बफादार कार्यकर्ताभन्दा पनि समग्र राजनीतिक प्रक्रिया र राज्यको नीति बुझ्न सक्ने क्षमता भएकी महिला हुन् । उनको मनोनयनलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाउनु नै उपयुक्त होला ।
विष्णु सागर पुरी
यहाँ कोमल वलीको मात्र विरोध किन ? को गाईको दूधले नुहाएको छ र ? सबै उही बारीका मुला हुन् । पात्रको विरोध गर्न छोडांै, बरु प्रवृत्तिको विरोध गरौं । सक्षम, इमान्दार, लगनशील र बौद्धिकहरूको राष्ट्रिय सभा भए पो ? राजनीतिक प्रवृत्ति बदल्ने कुरा छैन । संस्कार स्थापनाको कुरा छैन । त्यसैले अब विवेकको प्रयोगमा जनता लाग्ने कि ?
व्यक्तिगत रूपमा त कोमल वली राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएकोमा खुसी नै छु । नवराज सिलवालले टिकट पाउँदा उनलाई अस्वभाविक मान्नु किन ? तर हाम्रा नेताहरू के कुराबाट प्रभावित हुँदा रहेछन् ? यसमा थप के चर्चा गरिरहनुपर्‍यो र ? पार्टीको काममा वर्षौंदेखि सक्रिय, क्षमतावान्, पार्टी भक्त, ऊर्जाशील अरू महिला–पुरुष थिएनन् र ? यो राष्ट्र, पार्टी र परिवर्तनको अभियान र आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर जीवन समर्पित गरेका व्यक्तिहरूको उपहास हो । पार्टीमा आबद्ध भएदेखि नै सांसद पद चाहिने ? अवसर नदिने भन्ने होइन, पार्टीका कमिटीमा राखेर काम गराउनु पर्दैन ? यो प्रवृत्तिको जालोमा आफू लपेटिने कि सच्चिने र सच्याउने कार्यमा लाग्ने ?
वर्षांैदेखि जीवनदान गर्दै आएकाहरूको मनोभावना लत्याएर नवप्रवेशीलाई रानी बनाउने ? एमालेले जानेकै र गर्ने नै यही हो, यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस्ता उदाहरण धेरै देखिए । भाग्यमानी, कोमल वली ।
कोमललाई के प्यारो ?
सोसल ट्रेन्डबाट अरु
विश्वकप फुटबलसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधान असार ९, २०७५
ट्रेन्डिङमा कब्जा जेष्ठ १४, २०७५
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन मंसिर १०, २०७४
सेलिब्रेटीका झ्यानाकुटी पोज कार्तिक २९, २०७४
मजदुरले नमस्कार पाउने एक मात्र समय चुनाव वैशाख २९, २०७४
माने भाद्र २०, २०७१
८४ पूजामा फाल्गुन १६, २०७०